Fadhiga golaha shacabka oo ku dhammaaday Fashil!(Qeylo iyo Buuq laga furi kari waayay kulanka Maanta). | Weheliye Online
Fadhiga golaha shacabka oo ku dhammaaday Fashil!(Qeylo iyo Buuq laga furi kari waayay kulanka Maanta).
Fadhiga golasha shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo qorshihiisu ahaa ka doodidda xanuunka Covid-19 ayaa qabsoomi waayey kaddib buuq iyo sawaxan ay sameeyeen qaar kamid ah xildhibaanada Mucaaradka oo diiday in Fadhigu furmo, xubnaha golaha shacabka ee diiday furitaanka fadhiga ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha golaha shacabka in uu doonayey in muddo kordhin loo sameeyo madaxtooyada iyo Baarlamaanka.
“Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal wuxuu noo xaqiijiyay inuu dalbaday in la howlgaliyo 200 oo askar hubaysan ah wuxuuna ku hanjabay inuu dalban doono kuwa kale oo badan shaqsiyadana uu qaadi doono masuuliyada wixii waxyeelo ah ee ay geystaan kooxdan hubeysan ee Al Shabaab ka soo goostay” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan mudanayaasha Baarlamaanka ee mudo xileedkoodu dhamaaday ayaa sheegay in ay gudoomiyaha golaha shacabka uu ku wargaliyay in uu burburay heshiiskii 17-Septembar isla markaana loo baahanyahay in mudo kordhin loo sameeyo Madaxtooyada iyo Baarlamaanka.
“Gudi Xildhibaano ah oo u tagay Gudoomiye Mursal maanta intii uusan soo gelin hoolka shirarka Golaha Shacabka wuxuu u sheegay:
Ciidamada xarunta Golaha Shacabka la keenay in uu isagu dalbaday, lana soo badinayo” ayuu ku yiri qoraal uu ku daabacay Bartiisa Internet-ka.
“Guddoonka waa in uusan Tiket u jaran im waqtigiisa uu dhamaadey,” ayuu yiri isaga oo intaas ku daray in baarlamaanka lagu daadiyey ciidamo dharcad ah oo daacad u ah taliyaha hay’adda sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Xildhibaan Maxamed Cali Caanonuug ayaa sheegay in madaxweynaha iyo baarlamaanka waqtiga ka dhamaadey isla markaana qaabka kaliya ee waddanka uga badbaadi karo qalalaase ay tahay in doorasho loo dareero.
Mudaneyaasha taageersan Villa Soomaaliya ee kulanka kadib la hadlay saxaafadda ayaa ku eedeeyay mucaaradka oo ay ugu horeeyaan Puntland iyo Jubbaland in ay caqabad ku yihiin qabashada doorashadda isla markaana Madaxtooyaddu diyaar u tahay qabashadda doorashooyin heshiis lagu yahay.
Previous articleKooxda Daacish Soomaaliya oo wajaheysa kala shaki iyo Burbur dhaxdooda ah iyo Dagaalamayaal Badan oo ay iskaga dishay Buuraleyda Gobolka Barri.
Next articleMaanta mudo korarsigii miyaa la fashiliyay mise mucaaradka ayaa la shirqoolay?